ငယ်ငယ် | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (မ) / ငယ်ငယ်
Category Archives: ငယ်ငယ်
VA – Cherry FM 5th Anniversary
November 15, 2014 mars အခွေ (အများ) စန္ဒီမြင့်လွင် ဂျီလတ် ရဲရင့်အောင် နန္ဒစိုင်း ငယ်ငယ် ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ခင်စုစုနိုင် မိစန္ဒီ ဟန်ထူးလွင် သအို သီရိဆွေ Myanmar Artist New Myanmar Albums Rဇာနည်
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် – ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ [Album]
MediaFire & HulkShare Download Links ၀၁ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ Download ၀၂ အလွမ်းအထာ Download ၀၃ ဟိုက်ရှားဘား Download ၀၄ ဝိညာဉ်ဖက် Download ၀၅ ပြီးခဲ့သောဇာတ်လမ်းအကျဉ်း Download ၀၆ နား နား နား Download ၀၇ ရက်စက်မှကြေကွဲ Download ၀၈ ရည်းစားစာ Download ၀၉ ဒီလိုဆိုလူရှိန်ပြီ Download ၁၀ အပြာရောင်လမ်းခွဲ Download ၁၁ ဘုတ်ဖြစ်ပြီ Download ၁၂ ချာတိတ်အတွက် Download ၁၃ ဆရာမကြီး Download ၁၄ တစ်ကိုယ်တော် Valentine Download [Download Whole Album] [Download Whole … Continue Reading →
December 23, 2012 MMA အိမ့်ချစ် အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) စိုင်းစိုင်း ငယ်ငယ် သီရိဆွေ Bunny Phyo Media Myanmar Artist New Myanmar Albums3Comments
ပရိတ်သတ်များနှစ်သက်ကြရင် အမှတ် ၃ / ၄ / ၅ / ၆ – . – . ဆက်တင်ပေးသွားပါ့မယ် ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေဗျာ။ သီချင်းအမည်များထင်ထင်ရှားရှားမြင်နိုင်ရန် Image ပေါ်တွင် Mouse တင်ပြီး ကလစ်လုပ်ပါ။ Download Link Mediafire
September 25, 2010 Yee Wai Aung ကြိုးကြာ အခွေ (တကိုယ်တော်) ငယ်ငယ် ဆုန်သင်းပါရ် Rဇာနည် R ZarNi2Comments
July 25, 2010 shwewarmyay ဖြိုးကြီး အနဂ္ဂ အခွေ (အများ) ရှင်ဖုန်း ငယ်ငယ် ရွှေထိုက် ကျော်သူစိုး လင်းလင်း ဟိန်းဇော် Rဇာနည် စိုးရာဇာ စိုးမိုးမင်3းComments
01 ။ လေညှင်းလေးသိမှာပါ-ဆုန်သင်းပါ 02 ။ မချစ်ရဲဘူး-ရေဗက္က၀င်း 03 ။ ပြော-ခင်ဖုန်း 04 ။ ရေမြွေလေး-ဆုန်သင်းပါ 05 ။ အခုရပ်-ငယ်ငယ် 06 ။ အ.ထ.က ကျောင်းသား-စိန်ဝင်းထွန်း 07 ။ အချစ်ကလွဲလို့ဘာမှမသိ-တွယ်တာ 08 ။ သတိရတယ်နော်-စိန်ဝင်းထွန်း 09 ။ မင်းကိုဘဲချစ်တယ်-အင်္ဂလန်စိန် 10 ။ ရည်းစားထားမည်-တွယ်တာ 11 ။ လောကကြီးကအေးဆေးဘဲ-စိန်ဝင်းထွန်း 12 ။ မနာလိုဘူး-စိန်ဝင်းထွန်း 13 ။ နတ်မျက်စိချော်လဲ-စိန်ဝင်းထွန်း 14 ။ အချစ်နဲ့အတွေ့မှာ-စိန်ဝင်းထွန်း 15 ။ ငိုင်တိုင်တိုင်-အင်္ဂလန်စိန်+ဇုံ
June 27, 2010 Yee Wai Aung ငြိမ်းငြိမ်းအိ အခွေ (အများ) စိန်ဝင်းထွန်း ငယ်ငယ် ဆုန်သင်းပါရ် ရေဗက္က၀င်း ခင်ဘုဏ်း တွယ်တာ စိန်ဝင်းထွန်း Leaveacomment
အိန်ဂျယ် Volume 1 (Hip Hop)
အိန်ဂျယ် Volume 1 (Hip Hop) MMA မှာရှိပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် သီချင်းများနှင့် တေးစီးရီးကိုက်ညီမှုမရှိသဖြင့် ပြန်လည်တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။
June 17, 2010 the sun ကြိုးကြာ အဆိုတော် (အဖွဲ့) အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) စန္ဒီမြင့်လွင် စိုင်းစိုင်း စင်ဒီ ရဲလေး ရည်မွန် ငယ်ငယ် သီရိဆွေ Acid D-Beez J-Me Jenny Myanmar Artist Witch Leaveacomment
အိပ်မက်ဆိုတာ လူတိုင်းနဲ့မကင်းတဲ့အရာပါ။ အဲဒီတော့ အားလုံးအတွက် အိပ်မက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ သီချင်းလေးများကိုစုပြီးလုပ်ထားတဲ့ Playlist လေးတခုပါ။ ၁) အိပ်မက်ရောဂါ – အဝေးကဧည့်ခန်း ၂) အိပ်မက်ကမ္ဘာ – ဒွေး ၃) အိပ်မက်ရဲ့အသက် – ထွန်းအိန္ဒြာဗို ၄) အိပ်မက်ထဲကချစ်သူ – ကြိုးကြာ ၊ စင်ဒီ ၅) နှစ်ယောက်တစ်အိပ်မက် – L လွန်းဝါ ၆) ဆောင်းအိပ်မက် – L လွန်းဝါ ၇) အိပ်မက်ချစ်သူ – မဒီ ၈ ) အိပ်မက်အချိန်တိုင်း – ငယ်ငယ်
March 21, 2010 amedeo ကြိုးကြာ အဝေးကဧည့်ခန်း စိုင်းစိုင်း ထွန်းအိန္ဒြာဗို ရင်ဂို ငယ်ငယ် ဖြူဖြူကျော်သိန်း ဒွေး ဇော်ဝင်းထွဋ် Lလွန်းဝါ Rဇာနည် Theory 1 Comment